Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 15/02/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 15/02/2018
New York February 13
The United Nations Security Council heldabriefing session regarding the situation in Myanmar at its Chamber in New York on 13 February 2018. Myanmar Permanent Representative/Ambassador to the United Nations deliveredaStatement at the Security Council on the Government’s efforts in Rakhine State.
“The current humanitarian crisis is the consequence of terrorist attacks against security posts. It wasaclear present threat to the security, sovereignty and territorial integrity of Myanmar. It is notareligious issue as some people are trying to portray. The majority of Muslims living in other parts across Myanmar have been living peacefully and in harmony with other people of different faiths throughout history.”
“The challenges facing Rakhine State has no easy quick fix. Ultimately, it is up to the people of Myanmar to determine how to achieveapeaceful and prosperous Rakhine State.”
“Myanmar welcomes constructive cooperation from the international community. Myanmar should not become hostage of the one-sided media and activists in policy making process. Important judgment and policy decision should be based on careful examination of the information.” By U Hau Do Suan, Myanmar Permanent Representative to UN
The Full Statement can be seen on today’s “The Global New Light of Myanmar”.
—The Global New Light of Myanmar
Mothers, children in Sittway receive cash assistance for nutrition
Sittway February 14
Underaprogramme to help pregnant women and children under2years of age, expecting mothers, toddlers and babies in Sittway and at the Thakkepyin IDP camp received cash assistance on 14 February.
The programme is aimed at providing nutrition to children within 1,000 days after birth.
The cash was presented to mothers and their children on 14 February by Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr. Win Myat Aye and local authorities.
More than 8,000 mothers and children are eligible to receive the cash assistance under the programme, which is being carried out in Chin State, Rakhine State and the Naga Self-administered Zone.
မြန်မာအစိုးရ၏ ရခိုင်ပည်ြနယ်အရေးကိစ္စ ကြိုးပမ်းဆောင်ရက်မွှုများကို လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ရှင်းလင်းပြောကြား
နပြေည်တော် ဖဖ်ေဝောါရီ ၁၄
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနနှေင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပြောကြားပွဲတစ်ရပ်ကို ဖဖ်ေဝောါရီ ၁၃ ရက်တငွ် နယူးယောက်မြို့ရှိ ယင်း၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲ၌ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်၊ သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒို ဆမွ်းက ရခိုင်ပည်ြနယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရက်လျွက်ရှိသော တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး၊ မောင်တောဒသေတငွ် နရေပ်မှ စနွ့်ခွာခဲ့သူ များအား ပြန်လည်လက်ခံရေးအတကွ် ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများနှင့် ရခိုင်ပည်ြနယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး က်မောရှင်၏ အကြံပုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရက်နွမှေုများအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခက်အခြဲဖစ်ပွားမှုမှာ လုံခြုံရေးစခန်းများကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ တိုက်ခိုက်ခြဲ့ခင်း၏ နောက်ဆက်တြွဲပဿနာ ဖြစ်ေကြာင်း၊ ယင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လုံခြုံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မတြေည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတကွ် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ေကြာင်း၊ လူအချို့မှ ပုံဖ်ပြေောာကြားနသေော ဘာသာရေး ပြဿနာတစ်ရပ် မဟုတ်ေကြာင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အခြားသော ဒသေများတငွ် နထေိုင်ကြ သည့် မူဆလင်အများစုမှာ မတူကြွဲပားသော ဘာသာဝင်များနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် သဟဇာတရှိစွာ သမိုင်းတစ်လှျောက် နထေိုင်ခဲ့ကြကြောင်း၊
ရခိုင်ပည်ြနယ်တငွ် ရင်ဆိုင်လျက်ရှိသည့် စိန်ခေါ်မှုများအတကွ် လယ်ကွူ လျင်မန်ြစွာ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း မရှေိကြာင်း၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်မှာ မြန်မြာပည်သူများအနဖြေင့် ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသော ရခိုင်ပည်ြနယ်ကို မည်ကဲ့သို့ ဖ်ဆောောင်မည်ဆိုသည့် ခံယူချက်အပေါ်သာ မူတည်ေကြာင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရက်မွှုများကို ကြိုဆေိုကြာင်း၊ မူဝါဒချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တငွ် တစ်ဖက်သတ်ဆန်သော မီဒီယာများနှင့် လှုပ်ရှားသူများ၏ ဓားစာခံ မဖြစ်သငေ့်ကြာင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် အသအေချာဆန်းစစ်ပြီးမှသာ အရေးကြီးသော စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုများကို ဆောင်ရက်သွငေ့်ကြာင်း။” (မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်။ သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆမွ်း)
အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်။သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆမွ်း ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခနွ်းပါ အဓိကအချက်များအား ယနထေု့တ် မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများတငွ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါ သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ရခိုင်ပည်ြနယ်၊ စစ်တွမြေို့တငွ် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရကွ်
စစ်တွေ ဖဖ်ေဝောါရီ ၁၄
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နရောချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနသည် နိုင်ငံအတငွ်းရှိ ကလေးသူငယ် များ၏ ဘဝ ကနဦးပထမရက်ပေါင်း (၁၀ဝ၀)အတငွ်း အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသုံးခငွ့်ရ၍ ကျန်းမာ သန်စမွ်းသော လူသားအရင်းအမြစ်များအဖြစ် ရှင်သန် ကြီးပြင်းနိုင်စရေေး ရည်ရယ်ွပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော အသက် (၂)နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ အား ငွကြေးအထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ်အား အာဟာရ အခြေအနေ နိမ့်ပါးသော ဒသေများဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပည်ြနယ်နှင့် နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခငွ့်ရဒသေများတငွ် စတင်အကောင်အထည်ဖ်လျောက်ရှိသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်အရ ရခိုင်ပည်ြနယ်အတငွ်းရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော အသက်(၂) နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များအား ပထမအကြိမ် ငွကြေး ထောက်ပံ့မှုအခမ်းအနား အား ဖဖ်ေဝောါရီ ၁၄ ရက်က စစ်တွမြေို့ရှိ ရွာကြီးမြောက် ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပရာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နရော ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် ရခိုင်ပည်ြနယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုတို့ တက်ရောက်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးမိခင်များအား ထောက်ပံ့ငမွျေား ပေးအပ်ထောက်ပံ့သည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ ပထမအကြိမ်ငွကြေး ထောက်ပံ့မှုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလှိုင်လ၊ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများတငွ် အကျုံးဝင်ခဲ့သော အကျိုးခံစားခငွ့်ရှိသူများအတက်ဖြွစ်ပြီး စစ်တွမြေို့နယ်၌ အကျိုးခံစားခငွ့်ရှိသူဦးရေ ၈၀၇၆ ဦးရှေိကြာင်း သိရသည်။